ကျွနုပ်နှင့် မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရပ်များစွာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွနုပ်နှင့် မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရပ်များစွာ
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Mar 13, 2012 in Creative Writing, Short Story | 35 comments
ဘုိုကလေးမြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ခဏခဏသွားရတယ်…တစ်လကို အနည်းဆုံး တစ်ခေါက်ပေါ့…
ဘိုကလေးမြို့ ရုံးခွဲမပိတ်မချင်း၊ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့…
မိုင်(၆၀)လောက်ရှိတဲ့ခရီးကုို မော်တော်ကား (Off Road) နဲ့တောင် ၅နာရီလောက် အချိန်ယူပြီးသွားရလောက်အောင် လမ်းတွေကလဲဆိုး…မိုးတွေကလဲရွာ…နေကလဲကြဲကြဲတောက်ပူတဲ့အချိန်တွေမှာလဲ အချိန်အခါမရွေး ကျွန်တော်တို့ သွားခဲ့တယ်…
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော့်အကျင့်တစ်ခုပြောပြပါဦးမယ်…အကျင့်ဆိုးလို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တာပဲ…
ရာသီဥတုကလဲပူ…အလုပ်တွေကလဲများတဲ့အချိန်ဆိုတော့ နေ့ခင်းဘက်မှာ ချွေးတစ်ဒီးဒီးနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတော့ ညနေရုံးဆင်းရင် လူကိုယ်မှာ ချွေးတွေဖုန်တွေနဲ့ စေးကပ်ကပ်ဖြစ်နေတတ်တယ်…
ရေချိုးပြန်တော့လဲ မြစ်ရေမို့ ကြည်လင်ကြည်လင်လင်သိပ်မရှိပဲဖြစ်နေတော့ ရေချိုးရတာလဲမ၀သလိုပေါ့…
ပတ်ဝန်းကျင်ရာသီဥတုက ပူတာမို့၊ တစ်နေ့လုံး ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ရပေမယ့် ကျွန်တော်ညအိပ်ရင်တော့ ကောင်းကောင်းအိပ်ချင်တယ်…
အစိုးရကပေးတဲ့ မီးက ညနေ(၆)နာရီကနေပြီးတော့ ည (၉ )နာရီအထိပဲရတော့ ညပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်မီးစက်နဲ့ အဲယားကွန်းလေးဖွင့်ပေးတဲ့ တည်းခိုခန်းလေးကို ရှာပြီး အသဲအသန် Booking လုပ်ရတာပေါ့…
ကျွန်တော့်အကြောင်းသိတဲ့ နယ်ရုံးက အဖွဲ့တွေကလဲ ကျွန်တော့အတွက် သေချာစီစဉ်ပေးပါတယ်…ကျွန်တော့ကြောင့်သူတို့ ကရိကထများခဲ့ပါတယ်…
နယ်ရုံးမှာ အတူတူတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလဲ မှတ်မှတ်ရရ ဒီကနေ ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်…
အခုရေးပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘိုကလေးရုံးခွဲပိတ်ခါနီး (၃)လလောက်အလိုမှာ
အင်တာနက်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ဆိုင်းမဆင့်ဘုံမဆင့် ဘိုကလေးကို ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်…
ပြသနာက ကျွန်တော်တည်းနေကျ တည်းခိုခန်းက အခန်းပြည့်နေလို့ ရုံးကလူတွေလဲ အဲယားကွန်းလေးရတဲ့တည်းခိုခန်းကို ရှာပေးပါတယ်…
နောက်ဆုံးတော့ တည်းရမယ့်တည်းခိုခန်းကိုရသွားတယ်ဆိုပါတော့…ကျွန်တော်လဲ အ၀တ်ထုပ်ကို ချပြီး ရုံးမှာအလုပ်တန်းလုပ်ရပါတယ်…
တစ်နေ့လုံး ပြသနာရှင်းလိုက်ပြီး နောက်ဆုံးညနေ (၆)နာရီထိုးလောက်မှကိစ္စတွေပြီးတော့ လိုတဲ့ပစ္စည်းကို ကျွန်တော်နဲ့ပါလာတဲ့တစ်ယောက်က ရန်ကုန်မှာပြန်ယူဖုို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်…ကျွန်တော်က နောက်တစ်နေ့မှသွားစေချင်ပေမယ့်…နောက်ဆုံးသူ့ကို ကျွန်တော် ရန်ကုန်ပြန်ခွင့် ပေးလိုက်ရတယ်…
ဘိုကလေးမှာ GSM ကလဲ မမိလေတော့… တည်းခိုခန်းက ဖုန်းနဲ့ပဲ အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့ စီစဉ်လိုက်တယ်…
ညနေပိုင်း ရေမိုးချိုးပြီး ထမင်းထွက်စား၊ ဘီယာလေးဘာလေးသောက်ပြီးတော့…ည(၉ )နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်တည်းခိုခန်းပြန်ပြီးအနားယူပါတယ်…
တည်းခိုခန်းမှာ ကျွန်တော်နေရတဲ့အခန်းက အပေါ်ထပ် ဘယ်ဘက်ထောင့်ဆုံးအခန်းလေး…အပေါ်ထပ်မှာတည်းတဲ့သူ တစ်ယောက်မှမရှိတော့ နားအေးပါးအေးရှိတယ်ဆိုပြီး သဘောကျမိတယ်…ကံဆိုးတာကတော့ မီးမလာဘူးဗျာ…မီးမလာတော့ အဲယားကွန်းမရဘူးပေါ့…
ည (၁၁)နာရီလောက်ကျတော့ တည်းခိုခန်းကကောင်းလေးတံခါးလာခေါက်ပါတယ်…ဖုန်းလာလို့တဲ့…ရန်ကုန်ကိုပြန်သွားတဲ့သူက ပြန်ရောက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပို့တော့ ကျွန်တော်လဲ အောက်ထပ်ဆင်းပြီးစကားပြောတယ်…
ပြန်တက်လာပြီးတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲပြီး အိပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း အခန်းတံခါးလာခေါက်ပါတယ်…
တည်းခိုခန်းက ကောင်လေးအမှတ်နဲ့…ကျွန်တော်လဲ ဓာတ်မီးလေးယူပြီး တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်…
တံခါးဝမှာတစ်ယောက်မှမရှိဘူး…ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ တံခါးပြန်ပိတ်ပြီး အိပ်ဖို့ ကုတင်ပေါ်ပြန်တက်တယ်…
အိပ်ပျော်ခါနီးအချိန်မှာ ကျွန်တော် အ၀တ်ဟောင်းတွေထည့်ထားတဲ့ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကို ကြွက်လိုလို မွှေသံကြားရရော…
ကုတင်ခြေရင်းက ခုံလေးပေါ်မှာ ကျွန်တော်က အ၀တ်ဟောင်းအထုတ်ရယ်…ဆေးလိပ်ဘူးရယ်…ရေချိုးဆပ်ပြာရည်ဘူး…ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူး တင်ထားတာကိုး…
ငါ့အ၀တ်တွေကုန်ပါပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ ဓာတ်မီးထိုးကြည့်တော့ ကြွက်အရိပ်အယောင်လဲမတွေ့ဘူး…
အဲဒါနဲ့ ပြန်အိပ်ဖို့ခေါင်းလဲချရော…ကျွန်တော့မျက်နှာပေါ်ကို ဆေးလိပ်ဘူးကျလာတယ်…
တစ်ခုစီနဲ့ ကျွန်တော့ကို ပစ်ပေါက်တော့တာပဲ….မြင်အပ်၊ မမြင်အပ်တဲ့သူပေါ့…
အချိန်က (၁၂)နာရီထိုးနေပြီ…တခြားတည်းခိုးခန်းပြောင်းဖို့လဲမဖြစ်နိုင်သလို…တခြားအခန်းပြောင်းနေဖို့လည်း ကျွန်တော့်အဖို့မထူးတော့ဘူး
ကျွန်တော် စကားတစ်ခွန်းပြောလုိုက်တယ်…” ငါဒီနေ့ တစ်ညပဲအိပ်မှာ မင်းကိုလဲငါ မနှောက်ယှက်ဘူး…ငါ့ကိုလဲ မင်းမနှောက်ယှက်နဲ့” လို့ပြောပြီး
iPod ကိုနားကြပ်တပ်…အသံအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီး မရမကကြိုးစားအိပ်ပါတယ်…အိပ်လိုက်ပါတယ်…
ကုတင်ပေါ်လာပြီး တူတူအိပ်နေမှာစိုးလို့ ကုတင်ကို ကန့်လန့်ကြီးအိပ်ပြီး မိုးလင်းတဲ့အထိ မျက်စိမှိတ် နေလိုက်တယ်…
မိုးလင်းတော့လဲ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ရမှာကြောက်ကြောက်နဲ့ အသာလေးဖွင့်ကြည့် ဘေးဘယ်ညာဘာမှမရှိမှ အိပ်ယာထ၊ မျက်နှာသစ်ပြီး တည်းခိုခန်းအပြင်က ခုံတန်းလျားလေးမှာ ထွက်ထိုင်ရင်း လာခေါ်မယ့်ကားကို စောင့်ပါတယ်…
အဲဒီနေ့ ညနေပဲ ရန်ကုန်ကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်ခဲ့တယ်…နောက်တစ်ခါ ဘယ်ကိစ္စပဲရှိရှိ…အဲဒီလို တစ်ယောက်ထဲအိပ်ရမှာစိုးလို့ အဖော်ထည့်ပေးတဲ့ တည်းခိုခန်းကိုတော့ ရှောင်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်….
လောကမှာ မြင်အပ်…မမြင်အပ်နှစ်ရပ်များစွာဆိုတာ တကယ်ရှိပါလားနော်….
အော အသင်လူသား ကျွန်ုပ်တူတူ အိပ်ချင်တာကို အိပ်လို့မရအောင် ကန့်လန့်အိပ်တယ်ပေါ့လေ……. ဒါကြောင့် အသင့်အား ကျွန်ုပ်ပစ်ပေါက်ရခြင်းဖြစ်ပေသည်……….
နာသာဆို ရှုရှုနဲ့ပန်းမှာ……….. နင်က အဖော်လေးဘာလေးခေါ်အိပ်ပေါ့ဟဲ့…….ကြောက်တတ်ရင်……
အောင်မာ ကိုယ်ဟာကို တစ်ယောက်ထဲမအိပ်ချင်တာနဲ. သူဟာသူနေတဲ့သရဲ သွား တရားခံရှာနေပြန်ပါပြီ…
ယုံပေါင်တော်…. ရှင့်အကြောင့်ဖြင့် အံတိုနေပေါ့…
ဒါနဲ. သရဲက အထီးလား အစ်မလား ဟင်….
သူရဲက အမ …
သူရဲမက အသဲယားပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးနဲ့ ဆော်တာ …
အေးပေါ့လေ သူက လဲ ညညဆို ထောင်ထောင်အိပ်တာ ကို (ဒူး ကိုပြောတာနော် ဟိဟိဟ )
ဒါများဗျာ သရဲမနဲ. သရဲရွှင်တဲ့နှစ်ပါးခွင်လေး က ခဲ့ပြီးရော နော… ညံ့တဲ့ ကိုကြက်ဖောင်ဗျာ..
အမဆိုတော့ ညည်းက ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ
တောင်မ အုပ်ထိန်းသူကြီး တစ်ယောက်လုံးထားပြီ
မမြင်အပ်တဲ့ သူက အထီး မဟုတ်ပဲ အမ ဖြစ်နေလို့ နေမှာပေါ့။ ရှင်အခု ထွက်သွား ခု ထွက်သွား ဆိုပြီး တွေ့ကရာနဲ့ ကောက်ပေါက်နေတာ ဖြစ်မယ်။
အထီးဖြစ်သော် ဂုတ်ခွစီးပြီး လည်ပင်းညှစ်မယ် ထင်တယ်။
အဲ့ဒါ ခေဲးအိုစ့် တွေနေမှာဗျ…
လိုက်ဖ် နဲ့ နေးချား က ဒါမိုး ..မလုပ်တတ်ဘူး …
ဟယ်လူစီနေးရှင်း အာ့ထ်တွေပါဗျာ ..သိပ်တော့ မမြင့်ပါဘူး…
ဒီထက် နည်းနည်း ပိုမြင့်ရင်တော့ …မာမိတ် တွေဘာတွေဖန်ဆင်းတဲ့အဆင့်ဗျို့…
ဒါတွေ ပြောသာပြောရတယ်. .. သိပ်ပြောချင်တာမဟုတ်ဝူးရယ်…
မြင်အပ်၊ မမြင်အပ်ပါဆိုမှ…တော်ကြာ မြင်ရတော့မှ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်၊ မြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေရင်…
သူ့နေရာမှာ နာချိုလို့ကတော့ …
ထောင်ပြေး ရင်တော့ ဟို သရဲမ က လွှတ်မှာတောင် ဟုတ်တော့ဘူး ကိုကို တုံး ကိုကို တုံး ဆိုပြီး ဆွဲထားမှာ
အဲဒီထောင်နေတဲ့ ဟာကို (ဆံပင်)
ထောင်နေတဲ့ ဟာက ဆံပင် မို့ …
နို့မဟုတ်ရင် သရဲမတော့ လွယ်ဘူးရယ် …
သရဲမရေ .. အပေါ်က လူဂျီးက သရဲလည်း အလွတ်ပေးမယ့်ပုံ ပေါ်ဘူးဂျ ..
သူလာရင် သတိထား နေနော် ..
ယောင်မှားလို့များ သွားမစလေနဲ့ …..
အဲ ..ကိုယ်ကြောင်ဝတုတ်ရေ …. ။ အဲ့ဒီလိုကြီး ကြုံခဲ့တာလား .. ဟိုဟာနဲ့ပေါက် … ဒီဟာနဲ့ပေါက်နဲ့လား …. အစ်ကို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအားကိုးနဲ့ …. အဲ့ဒီအခန်းထဲ … ဆက်အိပ်ခဲ့တယ်တဲ့လား .. ဟိဟိ … ။
ညီမတို့သာ .. အဲ့လိုပေါ်တင်ကြီး .. အပစ်ခံရလို့ကတော့… ဖိနပ်တောင်မပါပဲ ..ရန်ကုန်ပြန်ရောက်သွားမယ်ထင်တယ် …
ပရလောကသားတွေ .. ရှိကောင်းရှိပါတယ် .. တစ်ခါတစ်လေ အမျှလိုချင်လို့ ခြောက်လန့်တာမျိုး ရှိပေမယ့် .. အခုလို လူကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တာကတော့ .. သက်သက်… နှောက်ယှက်တာပဲ .. လက်ဝှေ့ချင်း ယှဉ်ထိုးခဲ့ရမှာ … ။ ဟိဟိ .. ဒါနဲ့ ..ချွေးအ၇မ်းထွက်တတ်မှန်းတော့ .. သိပါတယ် … ပြီးခဲ့တဲ့ … အလှူတုန်းက … ချွေးတွေ ထွက်တာ .. သင်္ကြန် ရေပက်ခံပြီး ပြန်လာသလား မှတ်ရတယ်
juma လည်းတစ်ခါ ကြုံဖူးတယ်…အသိတစ်ယောက် နာရေးသွားတာ..
ရက်လည်တဲ့ညနေပေ့ါ.. သေတဲ့သူ တင်ထားတဲ့ စင်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းက လာယူတဲ့အချိန်ပေ့ါ..
အိမ်ရှေ့မှာ ခုံနဲ့ ထိုင်ပီး တစ်ယောက်တည်းစာဖတ်နေတာ နောက်မှာကလည်းသစ်ပုံပဲရှိတယ် ကြွက်တောင် လျှောက်လို့မရဘူး..အဲဒါကို ခြေသံကြားရတာလှည့်ကြည့်တော့လည်း ဘာမမရှိဘူး…. အင်း သိတော့သိလိုက်ပီ..ဒါသူပဲပေါ့.. ဘယ်ရမလဲ ပြရင်တော့ ကြည့်ကို ကြည့်လိုက်မှာဆိုပီး အေးဆေးပေါ့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခြေသံက ကိုယ့်နားကပ်လာတယ်..နဲနဲတော့ ဖြုံသွားတယ်..ရသေးတယ် ကြည့်မယ်ပေါ့ .. ခဏလဲကြာရော ဘယ်ဘက်လက်က ဖြန်းကနဲ့ ဖြစ်သွားပီး အေးသွားတယ် လူကိုဝင်တိုးသွားတာဗျာ… သူတို့ရဲ့ အသားတွေက အေးစက်နေတယ်လို့ကြားဖူးတာ တကယ်ကို ကိုယ့်တွေ့ပါပဲ ………………….. အနံ့တွေရော အရိပ်ပါတွေ့လာရတော့ ဟဲဟဲ ပြေးရတော့တာပေါ့ ကျွန်ုပ်လဲ လူသားပဲဆိုတော့ .. တစ်ကိုယ်လုံးသာပြလိုက်ရင် အသက်ပါ လွင့်သွားနိုင်တယ်ဗျ..
တကယ်တကယ်ကို ရှိတဲ့ ၀ိညာဉ် တွေပါ …
မှန်ပါ့။ ဦးလေးဆုံးတုန်းက အသုဘချတော့လိုက်မသွားဘူး။ ချခါနီးအချိန်မှာပြော လိုက်တာ အောင် မယ်လေးလာတောင်နှုတ်ဆက်ဖေါ်မရဘူး ဆိုတော့ ခဏနေတော့ ရောက်လာတော့တာပဲ။ ဘာပြောကောင်းမလဲတ အိမ်လုံးပိုဗျောင်းဆန်သွားတာပဲ။ သူတို့က ဖက်ဖက်ကက် ပြောသလို အပေါက်သန်တွေလား မသိဘူး။ တွေ့ရာလွှင့်ပြစ်တာ။ အိမ်မှာပွသွားတာပဲ။ နောက်ဆုံးပြန်တော့ ဆိုနှင်လိုက်မှရပ်သွားတော့တာ။ ရီနေရတယ်။ ပစ်စည်း တွေလိုက်ဖမ်းနေရတာ။ ရှေ့ကဖမ်းနောက်ကပစ်နဲ့။ ကလိလဲထိုးသွားသေးတယ်။
အင်…ထင်တာကတော့ ကိုကြောင်ဖက် သူဆီကတစ်ခုခုယူထားလားမသိဘူး… သူကအဲဒါကိုလိုက်ရှာတာ နေမှာပေ့ါ… မတွေ့လို့ဆိပ်ဇိုးပြီး ပစ်ပေါက်တာနေမှာ…….. အဟိ..အဟိ
သူရှိမှန်းသိသိကြီးနဲ့ ထွက်ပြေးလို့အခွင့်မသာတဲ့အခြေအနေမို့လို့ ကျိတ်မှိတ်ပြီးနေခဲ့ရတာ…
နောက်တစ်ခု မှန်ထဲက သရဲအကြောင်းရေးပေးမယ်နော်…
မှန်ထဲကသရဲ ဟုတ်လား….. ဒါဆိုကိုဖက်အကြောင်း ကိုဖက်ပြောမှာပဲဖြစ်မယ်…. အချင်းချင်း တွေပဲ ဥပဒီဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိပါတယ် ….. အများသိအောင်ကြေငြာချင်ရင်တော့ ရေးစေသတည်း ….. အဟီး ဟီး ဟီး……
ဟယ်ဖက်ဖက်ကက်ရယ်။ နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ကြီးမှာတယောက်ထဲအိပ်နေတော့စိတ်ဆိုးမှာပေါ့။ ခေါ်အိပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ သူလဲအိပ်ချင်ရှာမှာပေါ့။ ဒါ့ထက်ကန့်လန့်ကြီးအိပ်နေတော့တက်များဖိထားသေးလား။
အမလေး.. တယ်သိတ္တိကောင်းတဲ့ ဦးဖက်တီးပါလား… တော်ကြာ ခြေထောက်လာဆွဲလိုက်၊ ခေါင်းလာဆွဲ
မျက်နှာတည်တည်ထားပြီး “ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်မလား..” လို့ သရဲကိုမေးလိုက်…
ကျုပ်ကတော့ အမှန်တကယ် သရဲကြောက်တတ်တာ…
တခါတော့ ညဖက် ခပ်မှောင်မှောင်နေရာမှာ တယောက်ထဲရောက်နေတုန်း
အသံကြားသလိုလို အနံ့ရသလိုလိုနဲ့ သရိုးသရီဖြစ်လာလို့ ဒီလိုအော်ပြောလိုက်ရတယ်-
“ ဟေ့… ဟေ့… ငါက အစကတည်းကကြောက်ပြီးသားနော်… မင်းတို့အလုပ်ရှုပ်မခံနဲ့တော…….” လို့
ဖက်တီး ဆိုတော့ ဖီးတက်မယ်ထင်လားမသိ၊ ညံ့ပါ့ ထိပ်စည်းလေး နောက်ပိတ်လေးတောင်းခဲ့ရောပေါ့
ထိပ်စည်းပေးလို့ ရှူးတောင် မနက်ရောက်မှ ပေါက်ရပါတယ်တဲ့ဆို..
ဦးကက်ရေ နောက်ရော ပိတ်ပေးလိုက်သေးလားခင်ည….။
မယုံတဲ့လူက ပြည်သူ့ဆေးရုံတွေကို တစ်ရက်လောက် သွားအိပ်ကြည့်လိုက်ပါ..
တစ်ည လောက်အိပ်နိုင်ရင် လူတော်ပဲဗျို့
ဆေးရုံ ဝန်ထမ်းတွေတောင် တစ်ယောက်တည်း ဘယ်တော့မှ မအိပ်ဘူး
နာဂစ်ဆိုတော့ အစိမ်းသေ သေသွားတဲ့သူတွေ အများကြီးဆိုတော့ကာ…..
လာကူညီပေးတဲ့ ဖက်တီးကက်ကို သူ့တို့ဘာသာနဲ့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဒီတစ်ခါတွေ.ရင် ပိုက်ဆံချေးလိုက် ဒါမှမဟုတ် နှစ်လုံးထီဂဏန်းတောင်းလိုက် …..
သူရို့ က ပါဝါ ပေါ်လိုက်ပြီး အတော်လေး သဘာရင့်မှ ပစ္စည်းတွေ ကို ကိုင်နိုင် ပေါက်နိုင်တာကလား။
အမယ် …. ဒီ အတိုင်းလဲ လွယ်လွယ် ရမယ် မထင်နဲ့ ။ ဆရာ့ ဆရာ နဲ့ ကျင့်ရတာနော်။
မင်း ရဲ့ မြင်အပ်မမြင်အပ် ကလဲ တော်တော်ပါဝါမြင့် အောင် ကျင့်ထားပုံရတယ်။
မပြောမရှိနဲ့။ အရီးလဲ မြင်ဘူးတယ်။
ဒီမီမိုး ပါတဲ့ သရဲ Ghost ရုပ်ရှင် ထဲမှာ။
ခင်လို့ စတာ။ ချိတ်ချိုးနဲ့။ ;-)
Ghost ကားအပြင် ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ သရဲကားတစ်ကားရှိသေးတယ်…
The Sixth Sense မင်းသားကတော့ Bruce Willis အဆဲကြမ်းတဲ့မင်းသားကြီးပေါ့..
ထပ်ပြီး ပြောရရင် Demi Moore ရဲ့ အမျိုးသားဆိုလဲ မမှားဘူးပေါ့နော်…
သူတို့ (၂)ယောက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ သရဲကား (၂)ကားလုံးကို ကြိုက်တယ်…
တစ်ယောက်ထဲ ပျင်းမှာစိုးလို့ အဖေါ်လာလုပ်ပေးတာ နေမှာပေါ့ကွယ်………..
အော်မြင်အပ်မမြင်အပ်ဆိုတာ တကယ်ရှိတာကို မမြင်ဖူးတဲ့သူ။ အယုံကြည်မရှိတဲ့သူတွေ တဲ့တဲ့တိုးမှ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်တာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်တွေ့ရှိမှ ယုံတာမျိုးဆိုတော့။ ဘ၀မှာ အတွေ့ကြုံ သစ်အနေနဲ့တဲ့တဲ့တိုးကြပါစေ။ အဲဒါမှ မအိ ရဲ့ ဦးလေးလို အကြောက်လွန်ပြီး ဆရာဝန်ခေါ်ရမှာ……..ဟီးဟီး မှတ်ကရော